(1) Understanding AARTO - HR & Managers - Administrative Adjudication
HR & Abaphathi
Ukwanda kokwephulwa komthetho
i-AARTO njengokugxila kwebhizinisi okuyisisekelo
.Abiwa kanjani amaphuzu
Isebenza kanjani inqubo yokwahlulela
Isistimu ye-demerit point
Abiwa kanjani amaphuzu
Ungawagcwalisa kanjani amafomu e-AARTO
Uma ukwephulwa komthetho kungaqokwa
Ingabe inkampani yakho isilungile?
Lokhu kuhlanganisa ukubajwayelanisa nomtheto,lapho amaphuzu enikezwa futhi lapho amalayisense okushayela emiswa, ukuqonda amafomu e-AARTO, kanjani futhi kuphi ukuqapha amaphuzu afgafaneleki kanye nemiphumela yokungathobeli.
Lesi sifundo siyisixazululo esiphelele esinokuphazamiseka okuncane kodwa nomthelela omkhulu.
Isifundo siyashesha ukuqedwa sigcwele lonke ulwazi oludingekayo olunamaphepha emibuzo asezingeni eliphezulu nesitfiketi sokuphothula njengobufakazi bokuqeqeshwa nokuhambisana.
Uma abasebenzi bakho bokuphata bengaluqondi uhlelo Lokwahlulela, uzoba nesibopho sokukhokha ukwephulwa komthetho ongeke ukuqondise kabusha.
Making AARTO a core business focus
Izinkampani kuzodingeka zibhekisise kabusha izinkontileka zazo zokusqashwa, izinqubomgomo nezinqubo zabo bonke abasebenzi abadinga ilayisense yokushayela esemthethweni ukuze bafeze imisebenzi yabo.
IUma ifomu le-AARTO lingagcwaliswanga ngendlela efanele lingase libabbezele inqubo yako futhi libangele ukubambezeleka okungadingekile kubasebenzi bakho bokuphatha.
i-AARTO izosethenziswa ngendlela enezigaba. Siphinde sibheke ingosi ye-AARTO nezinhlelo zokusebenza seselula nokuthi ungazisebenzisa kanjani.
i-AARTop izojezisa amabhizinisi kanye nabaqhubi bemikhumbi abanecala lamacala omgwaqo ngokubeka amaphuzu angafaneleki. Uma sekweqiwe unkhawulo wamaphuzu, ilayisense yokushayela imiswa izinyanga ezintathu bese kuthi ngemuva kwamakhovisi amathathu iyesulwe. Lokhu kuzoba nomthelela omkhulu ezinkampanini ezinemikhumbi noma abasebenzi abathembele ezincwadini zabo zokushayela ukufeza imisebenzi yabo. Izimoto zenkapani yakho nazo ngeke zikhavwe kunoma yiziphi iizicelo zomshwalense uma abashaveli bakho bewasmisile amalayisensi.
Lungiselela namahla futhi uqiniseke ukuthi unawo wonke amasistimu nezingubomgomo zakho endaweni.
Lesi sifundo siyithuluzi elihle lezinkampani ezinabashayeli. Uma abashayeli bakho beqonda imithelela nemiphumela yokungathobeli imithetho, kuzoba lula ukusibenzisa izinqubomgomo nezinqubo zakho ezibuyekeziwe.